Fiozao ny ora UTC +2
Miisa eo amin'ny 48.7 tapitrisa eo ho eo (araka ny lazain'ny census tamin'ny taona 2008) ny mponina ao. Be harena an-kibon'ny tany i Afrika Atsimo (volamena, diamondra sns.), ireo harena ireo no anisan'ny mahatonga azy ho firenena matanjaka indrindra ao Afrika.
2.1 Ireo faritany
I Afrika Atsimo dia any amin'ny farany atsimon'i kaontinanta afrikanina.
Ny toetr'androny dia karazana toetr'andro mediteraneanina manodidina ny Cap ary tropikalina any avaratra sy any antsinanana. Maimaina ny toetr'andro any amorontsiraka atlantika.
Voapitan'ny tendrona Drakensberg ny antsinanan'i Afrika Atsimo.
47 556 900 ny isam-ponina any Afrika Atsimo. Ny tanàna lehibe indrindra any Afrika Atsimo dia ny Tananan'i Cap (2 984 100), Durban (2 531 300) ary Johannesburg (1 975 500) sy Pretoria (1 473 800), araka ny lazain'ny faminavinana tamin'ny taona 2004.
Ireo faritany[hanova | hanova ny fango]
ny faritany afrikanina sivy
Manana faritany sivy i Afrika Atsimo (hatramin'ny taona 1994 katramin'izao). Ireto avy ny lisiny :
Cap avaratra (Northern Cape) : Any avaratra ilay faritan'ny Cap taloha
Limpopo : Faritra Transvaal-Avaratra taloha, notononina faritra avaratra tamin'ny 1995 hatramin'ny 2002
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Afrika_Atsimo&oldid=767972"